Eran-tany: 700 tapitrisa ny miaina ao anaty fahantrana tanteraka | NewsMada
Eran-tany: 700 tapitrisa ny miaina ao anaty fahantrana tanteraka
Melohin’ny Firenena mikambana (ONU) ny fitsinjaran-karena be elanelana loatra ka vao mainka mampitombo ny fahantrana. Mpiasa 700 tapitrisa maneran-tany ny miaina ao anaty fahantrana tanteraka, ankoatra ireo tsy anasa, noho ny karama tsy zarizary. Nofinofy, noho izany, raha ny famakafakan’ny ONU, ny hahatrarana ny tanjon’ny fampandrosoana afaka 10 taona raha mitohy izao. Tsy voafaritra ao anatin’ny harinkarena faobe (PIB) ny rehetra. Navoitran’ny ONU, ny 16 janoary teo, ny fahasamihafana amin’ny alalan’ny antontanisa sy ny endriky ny “fandrosoana”, indrindra ny fiantraikany amin’ny tontolo iainana, ny toetr’andro, ny fihenam-bokatra. Endrika iray ny fahantrana ny fahapotehan’ny tontolo iainana, raha ny fanavazan’ny ONU ihany. Nampian’ny ONU fa mihisatra ny toekarena eran-tany mandritra ny taona 2020-2021.
Mpanefoefo 2 153 ny tompon’ny 60 %-n’ny vola
Araka ny tatitry ny ONG Oxfam any Angletera, tompon’ny 60 % amin’ny vola eto ambonin’ny tany ireo mpanefoefo 2 153 manana amina miliara dolara. Takin’ny Oxfam amin’ny tatitra ataony ny tokony handoavan’ireo vitsy anisa ireo hetra ara-dalàna. Tsy misy fiovana ny elanelana be loatra eo amin’ny mpanana sy ny mahantra raha tsy mazava ny ady amin’ny tsy fitoviana. “Mila takin’ny governemanta ara-drariny ny hetran’ireo orinasa fananan’ny mpanankarena”, hoy i Amitabh Behar, ao amin’ny Oxfam. Ambaran’ny Oxfam, toy ny mahazatra isaky ny fivoriambe « World economic forum », andiany faha-50, natao tany Davos, Soisa, izany elanelana be misongadina izany.
Tsy hita taratra ny « zéro carbone »
Tamin’ny taon-dasa 2019, nanaovana fampielezan-kevitra maneran-tany ny hanavaozana ny tontolo iainana manoloana ny fiovaovan’ny toetr’andro. Tanjona nambara ny « zéro carbone » na rivotra madio tanteraka ka namaritra izany voalohany ny filoha amerikanina, i Donald Trump. Tsy hita taratra anefa na kely aza ny « zéro carbone » tamin’ny taona 2019 avy amin’ny asan’ny governemanta, na ny orinasa. Nisy ihany ny ezaka kely vitan’ny vitsy anisa. Koa ity 2020 ity ny taona voalohany hampifandraisana ny fiharian-karena tsy hanimba ny tontolo iainana. Tokony ho hita amin’ity taona ity ny vokatr’izany, mbola tsy hita taratra aloha hatramin’izao, raha ny fihanaky ny rivotra maloto, ny fahapotehan’ny ala sy ny fihanaky ny fako plastika.